Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada S.Ogadenya Ee Bariga Afrika (JABSO) oo Bayaan Kasoo Saartay Shirqoolka Gumaysiga Itoobiya.
Jaaliyada S.Ogadenya Ee Bariga Afrika (JABSO) oo Bayaan Kasoo Saartay Shirqoolka Gumaysiga Itoobiya.
Posted by Wariye Qaran	/ April 29, 2017
Jaaliyada Bariga Afrika ee Somalida Ogadenya ayaa bayaan kasoo saartay shirqoolo cusub oo Gumaysiga Itoobiya & Jawaasiisteedu wadaan.
Waxayna bayaankan kaga hadleen Arimo kusaabsan dhagarta ay shacabkeena umaleegayaan Sirdoonka Gumaysiga Itoobiya iyo shakhsiyaad soomaali ah oo xidhiidh toos ah & Wadashaqayn joogta ah la leh Cadowga ummada Somaliyeed.
Hadaba bayaanka ay soo saaraan JABSO ayaa u qoraa sidatan.
JAALIYADA AFRIKADA BARI EE SOOMAALIDA OGAADEENYA (JABSO)
Waxaa baraha bulshada todobaadkan dhexdiisii lagu arkayay shaqsiyaad sheeganaya inay kamid ahaayeen Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO) kuwaasoo qofkii dhagaystay ama looga sheekeeyay ficiladooda uu si dhibyar u fahmayo in ay Cadowga ummada Soomaaliyeed si toos ah ugu xidhan yihiin.
Hadaba anagoon ka jawaabaynin aragtidooda guracan iyo qoraalada ay kusoo Xar-xariiqeen baraha bulshadu ku xidhiidhaan, ayaa waxaanu doonaynaa inaan lasocodsiino bulshada Somalida Ogadenya dhagarta ay isla maleegayaan Gumaysiga Itoobiya.
Sidaad lawada socotaan Gumaysiga Itoobiya oo si joogta ah dhibaato ugu haya shacabka Somalida Ogadenya dalka gudihiisa iyo wadamada dariska ah, ayaa Jawaasiis qarsoon bulshada kusoo dhex-darsaday oo qaar badan oo ka mid ahaa horey u fashilmeen, Waxaa sidoo kale banaanka usoo baxay kuwa islahaa waad qarsoon tihiin, hasa ahaatee uu dhabarku muuqday, oo dabagal iyo baadhitaan kadib la ogaaday in ay xidhiidh iyo wadashaqayn rasmi ah la leeyihiin Sirdoonka kadhex shaqeeya Safaaradda Gumaysiga Itoobiya ee Kenya & kuwa Gudahaba.
Kooxdan oo dhagartii loo soo xambaariyay isku dayay in ay bulshada lasoo dhex galaan ayaa magacyo badan loo bixiyay waxaana magacyada caanka noqday kamida:
iyo Cadhooleyaal iwm.
Kooxdan ayaa waxay bulshada lamaaganaayeen inay falaadhaha dhagareed ee Sirdoonka Itoobiya kusii dhex daayaan ummada iyagoo urixiyay islamarkaana doorbidey in ay sandareero ama luf-luf aan macno lahayn qaataan kadibna ay danaha Gumaysigu leeyahay u fuliyaan waxaana loo soo dhiibay in ay ku Hawlgalaan halku-dhegyo macquul u eg oo qofka caadiga ah aanu fahmi karin ujeedada kadanbaysa oo sidaa uu ugu kadsoomayo kadibna uu ku dhacayo dabinka loo qoolay.
kooxdan ayaa dabagal dheer oo lagula socday ilaa Sanadii 2014 lagu ogaaday in ay xidhiidh la lahaayeen xubno kamid ah Sirdoonka Tigreega, waxaana dhowr jeer si ururnimo leh looga hor joogsaday iskudayo ay damceen inay Jaaliyadda ku jaha wareeriyaan.
Markii si dhab ah loo xaqiijiyay in ay cadowga la leeyihiin xidhiidh oo ay Cadaatay in ay sitoos ah ugu xidhan yihiin Safaaradda Cadowga ayaa waxaa laga hakiyay hawlihii ay qaar kamid ah bulshada uhayeen iyo dhaqdhaqaaqii ay ururka ku dhex lahaayeen.
Shaqsiyaadkan banaanka isa soo dhigay ayaa waxay ka kooban yihiin Sadexdan Qaybood ee soo socota:
1- Rag aan JWXO kamid noqonin fahamsanayna ujeedada uu Ururka ONLF .
2- Kuwo Danbiileyaal ah oo danbiyo ay galeeni markay ku cadaadeen Ururka laga ruqseeyay Sanado kahor.
3- Qayb Talaalan oo siyaaba kala duwan loo hawlgaliyay oo ah kuwa inta badan fidnada Wareejinaya, iyagoo xog aan jirin kudhaar dusmaysanaya oo doonaya inay bulshada ku khaldaan.
Waxaanu guud ahaan bulshada Somaliyeed ee Ogadenya ku baraarujinaynaa in Shirqoolada Itoobiya aan lagu kadsoomin oo aan lagu indha-suraxaadinin dacaayadda iyo mala-awaalka aan sal iyo raadtoona lahayn ee lasoo dhoob dhoobay ee la doonayo in Halganka Shacabka lagu marin habaabiyo.
Waxaan ku faraxsannahay sida dhibta yar ee ILLAAHAY Ummada ugasoo dhex-qabtay munaafiqiinta fashilmay. Waxaan Shacabka Sharafta badan ee Soomaalida Ogadenya ee kudhaqan Afrikada Bari aan leenahay; Walaalayaal waa in aan meel qudha uga soo wada jeedsanaa fashilinta Jawaasiistan dhagarqabeyaasha ah ee Tigreegu Daaha Dabadiisa ka Maamulayo. Waana in sigaara loola socdo marwalba Jawaasiista iyo Sirdoonka Tigreega soo dirayba.
Shacabka Somaliyeeda Ogadenyana marnaba Gorgortan kama galayaan doonistooda ama Rabitaankooda ay ku raadsanayaan inay Gumaysiga Itoobiya kaga Xoroobaan.
Waxaanu Shacabka Somalida Ogadenya ee Gumaysigu mudada dheer Gumaadka iyo Xasuuqa kusoo hayay ugu Baaqaynaa inay Fahmaan, Ogaadaan, lana socdaan Burburka Itoobiya ay wajahayso xiligan iyo inay Jawaasiista uu dirsanayo Gumaysigu ay tahay Rafashadii ugu danbaysay ee Cadowgu sameeyo.
Waxaan Bayaankan kusoo Gabagabaynaynaa in Dhamaanteen oo isku duuban aan Hiil & Hooba lagarab istaagno Halganka XAQA ah ee ay Hormuudka u tahay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO) kaasoo aan ku gaadhayno Xoriyada iyo Xaqa Aaya-katashiga lama Taabtaanka ah ee shacabka Ogadenya uu leeyahay, Inshaa Allaah.
XAFIISKA GUDOONKA JABSO